La heli karo si loo soo dejiyo Firefox 14.0.1 | Laga soo bilaabo Linux
La heli karo si loo soo dejiyo Firefox 14.0.1
Xitaa marka gudaha Mozilla uusan si rasmi ah ugu dhawaaqin (sida caadiga) nooca 14 ee Firefox, kaas oo si toos ah uga socda nambarada 13.0.1 ilaa 14.0.1.
Noocani wuxuu ka kooban yahay horumarin yar, laakiin qaar baa xiiso leh. Bilowgii hore, raadinta ayaa hadda adeegsanaya https, wax in kasta oo la qiimeeyo, ay dhibaato ku noqon doonto adeegsadayaasha xiriirkoodu gaabis yahay. In kasta oo aanan cilmi baaris ku sameynin, waxaan u maleynayaa inay tani naafonimo ku noqon karto adeegsiga ku saabsan: config.
Faahfaahin qurux badan ayaa lagu darayaa marka la eego isdhexgalka waana taas favicon hadda waxaa lagu muujiyay isku dhafan cinwaanka cinwaanka.
Cinwaanka cinwaanka sidoo kale wuxuu si otomaatig ah u dhammaystirayaa URL-yada la geliyay oo qaar ka mid ah isbeddelada kale ayaa lagu daray oo aad ka arki karto xidhiidhkan.
1.0.1 gelinno 32
1.0.2 Firefox 14.0.1 Linux Spanish (Isbaanish) Firefox 14.0.1 Linux Isbaanish (Mexico) Firefox 14.0.1 Linux Isbaanish (Chile) Firefox 14.0.1 Linux Isbaanish (Argentina)
1.0.3 gelinno 64
1.0.4 Firefox 14.0.1 Linux Spanish (Isbaanish) Firefox 14.0.1 Linux Isbaanish (Mexico) Firefox 14.0.1 Linux Isbaanish (Chile) Firefox 14.0.1 Linux Isbaanish (Argentina)
Firefox 14.0.1 Linux Isbaanish (Spain)
Firefox 14.0.1 Linux Isbaanish (Mexico)
Firefox 14.0.1 Linux Isbaanish (Chili)
Firefox 14.0.1 Linux Isbaanish (Argentina)
Nota: Waxaan sidoo kale soo dejisan karnaa Thunderbird 14, taas oo sida aan ognahay, aysan ku jirin wax xiiso leh, kaliya hagaajinta amniga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » La heli karo si loo soo dejiyo Firefox 14.0.1
Aad u wanaagsan ..
By habka, Ikey Doherty wuxuu ku dhawaaqay helitaanka noocyadan Solus.
Wax aad u xiiso badan ayaa ah in intuu waxoogaa akhrinayay qoraalladiisa oo uu arkayay sida horumarinta qaybta 2 ee Solus ay u socoto, qof ayaa u sheegay isagoo weydiinaya su'aasha soo socota:
+ Ikey Doherty miyaad qaadan doontaa Gnome 3.6 SolusOS 2? Waxaan rabaa inaan arko, Gnome 3.6 wuxuu hayaa waxyaabo badan oo cusub iyo dheef dheeri ah sida isdhexgalka Skydrive ee barnaamijka Gnome dukumiintiyada naqshadeynta shaashadda qufulka cusub iyo waxyaabo badan
Waxa loo tarjumay waxay noqon laheyd wax sidan oo kale ah:
Ikey Doherty Sidee Gnome 3.6 loogu qaadan doonaa SolusOS 2? Waxaan rabaa inaan arko, Gnome 3.6 waxay haysaa waxyaabo badan oo cusub iyo dheef dheeri ah sida isdhexgalka Skydrive ee dukumiintiyada codsiga Gnome shaashad cusub oo shaashad ah oo qaawan iyo wax badan.
Ikey ayaa kujawaabay:
Waxyaabaha ay ka mid yihiin qufulka qufulka uma lihi.
Waxay gabi ahaanba isku khilaafeen taas kadib markii ay kala baxeen taageerada shaashadda laakiin w / e
Waxay u rogayaan kiniin waqti weyn ah
Si dhab ah ayaa loo tarjumay:
Waxyaabaha ay ka midka yihiin muftaaxa qufulka aniga waxba igama gelin.
Waxay gebi ahaanba ka hor imaanayaan kuwa ka dib markii ay jeexjeexeen taageerada shaashadda, laakiin w / e Waxay u rogayaan waqti weyn oo la isku soo koobay
Tani waxay ka jawaabaysaa su'aasha aan haystay maalmo haddii Solus uu isticmaali doono Gnome 3.6 ^ _ ^
Google mararka qaar wuxuu noqon karaa suugaan suugaaneed, hahaha….
Mar baan aqriyay weedh Gates ah oo ila dhegtay. "Barnaamijka bilaashka ah wuxuu leeyahay dhibaatooyin is-dhexgal ah." Oo halkan waa muunad ka mid ah, mana aha oo keliya la is-dhex-geli karo, waxay sidoo kale u qalmin saldhiggeeda.
Miyaa lagu siiyaa lacag si aad wax kasta ugu xidhiidhi karto qaybinta "yaabka leh"? Waxay bilaabaysaa inay daasho.
Qofku waa inuu ogaadaa markuu qofku ku dheganaado qaybinta, inuu ilaaliyo oo u bishaareeyo ilaa geerida ...
Ku jawaab jawaab-bixiye kale
Laakiin si aad ugu sii socoto mowduuca, boostada ayaa ku saabsan Firefox ... fadlan, qof kasta oo adeegsada oo wacdiya waxa ay doonayaan ...
muxuu gnome ku sameeyaa Firefox?
Ragga ha isdajiyaan ... Ma wacdiyo wax walboo .. waa macluumaad loogu talagalay kaliya in la sii mariyo <° Linux.
Aniga ahaan waxa ugu xiisaha badan ee cusub ayaa ah tan:
Plugins-ka hadda waa loo qaabeyn karaa inay kaliya ku shuban karaan guji (waxay u baahan tahay wax ku saabsan: isbeddelka qaabeynta)
Waxay wax badan ka caawin doontaa in laga fogaado dhammaan waxyaabahaas (inta badan xayeysiinta) ee aynaan xiiseyneynin degel websaydhka marka lagu daro in culeyska la dedejiyo. Marka laga hadlayo Thunderbird in kasta oo lagu dhawaaqayo waa inaan sheegaa inay jiraan rajo aad u wanaagsan, liiska dirista qorshaynta ee dr tb waa mid aad u firfircoon waxaana horeba u jira ugu yaraan shan horumariyayaal oo abaabulaya hanaan ay ku sii wadaan dayactirka Thunderbird iyagoo ka bilaabaya hagaajinta cayayaanka hadda jira, iyo muddada dheer oo leh naqshad sameynta curiyaha farriinta si dhab loogu taageero html iyo CSS.
Astaanta Mozilla ee la socota qoraalkan ayaa qurux badan.
Waan fahansanahay inay keeneyso daawade PDF ah, hagaajinta amniga iyo waxa aan jeclaan lahaa inaan ogaado waxa ku dhici doona dhibaatooyinka laydhka ee aan si buuxda loogu hagaajin V13.0.1
Faahfaahin qurux badan ayaa lagu daray marka la eego isdhexgalka waana in favicon hadda la muujiyay isku dhafan cinwaanka cinwaanka.
Saas ma aha, waxay ka saareen bar cinwaanka, maxaa yeelay waxay u tagi jirtay hal dhinac oo ka mid ah oo hadda ma aha.
Waa run, hadda faviconku mar dambe uma soo muuqan doonaan cinwaanka, ra'yigeyga, waan ka sii jeclaaday ka hor. Si loo helo wado dib loogu dhigo.
Ka dib markii aan baaritaan yar ku sameeyay webka, waxaan ogaaday sababta ay Mozilla u go'aansatay inay ka saarto favicons-ka cinwaanka cinwaanka.
[Mar dambe ma jiri doonaan wax faallo ah oo ku yaal barta cinwaanka
Firefox 14 sidoo kale waxay favicons ka saareysaa barta cinwaanka. Mozilla waxay ogaatay in qaar ka mid ah boggaga internetka ee phishing-ka ay isticmaalaan favicon-ka si ay uga gudbaan xannibaadda Mozilla, iyo daalacayaasha kale ayaa inta badan muujiya mareegaha sirta ah
Sidaa darteed, Firefox hadda waxay soo bandhigeysaa oo keliya astaamaha guud ee gundhigga u ah cinwaanka cinwaanka si ay u muujiyaan degel caadi ah, iyadoon sir laga dhigin iyo astaanta qufulka ee bogagga HTTPS. Favicon wali waa laga arki karaa barta tabta, dabcan.]
Xigasho …… ..Softpedia
Internet Explorer 10 ayaa sheegaysa inaysan wax micno ah siinaynin waxa ay Mozilla leedahay, hahaha. http://i.imgur.com/Wp8IT.png
Tafaasiishaani waa waxa aanan jeclayn ... waxaan jeclahay favs 🙂
Waa run, waxa hadda soo baxayaa waa meere ama quful ku xiran isku xirnaanta taas.
Lagu cusbooneysiiyay Chakra. oo si aad u wanaagsan ayey u socotaa. isbeddelada interface waa khiyaano, laakiin waan jeclahay iyaga. dhinac, dhibaatadii aan ku darsaday astaanta astaanta-hawsha, waa la xaliyay.
Waxaan isticmaalaa "Iceweasel" maantana cusbooneysiinta otomaatigga ah si fiican ayey u shaqeysay, mar hore ayaan isticmaalayaa "Iceweasel 14.0.1" "Debian Squeeze".
Kuwani Debian-ka ah ayaa dhagaha ka jiidaya distros-ka, Ubuntu shalay waxaan ku lahaa 13-ka, markaan akhriyo faalladaada dib ayaan u eegay waana horeba 14 ... 😀
Waxaad ku qaadsiisay cudurka loo yaqaan 'versionitis', xd
Waxaan hadda rakibay xubuntu 12.04 iyo cusbooneysiinta Firefox 14.0.1 ayaa timid, distoorka si fiican ayuu u shaqeynayaa.
Ku jawaab fede
Sidaan akhriyay, Firefox sidoo kale waxay yareyn doontaa Frequency-ka cusbooneysiintiisa.
Sida muuqata maya, ama gadaal ayaan arki doonaa ..
Microsoft ayaa xannibtay goobta tabarucaadda ee FSF
Tux Info # 49 majaladda la heli karo